Iwe unogona kuwana kuravira kwangu mumimhanzi zvakatsamwa, ndinonyanya kufarira bhendi remuno Joinha Vakafa kuno kuIndianapolis. Kwemakore, ini ndave kuwanda uye nekuwedzera fan yeanorarama, isina kujeka, uye emuno mabhendi. Ndinoda kuva nedoro nebhendi uye ndinofarira ruzivo rwemuno rwemuno zvakanyanya kupfuura rimwe bhendi randisinganyatso kuona kubva kuzvigaro zvine mabonzo emumhino munhandare yemuno kana nhandare.
Kutaura chokwadi, nepo akawanda mabhendi akakura uye nyeredzi dzemimhanzi dzichichema pamusoro pedenga richidonhera paindasitiri yavo, ndinotenda nhepfenyuro yepamhepo yakashandura indasitiri yemimhanzi kuita nani. Panzvimbo pevamwe vashoma kunze uko vanosarudza mimhanzi ichanzwikwa kana inotevera boy band ichave nyeredzi, isu tave nevatengi vemimhanzi vachisarudza zvavanoda kunzwa. Hatisati tasvika zvachose - asi hapana mubvunzo kuti bhendi risingazivikanwe rinogona kunzwikwa ikozvino kupfuura nakare kose, kunyanya kana vachizvitengesa pachavo pamhepo.
Tags: bandcampmapokabandintowndigital advertisingbatanai nevakafavaimbimabhendi edomboseoSoundCloudteereraYouTube
Chinyorwa chinozorodza chakadaro!
Ini ndiri munhu anonakidzwa nemimhanzi ini uye ndinoda zano remaindasitiri chaiwo ekushambadzira zano. Basa rakanaka!
Inodiwa zvakanyanya sezvo mimhanzi yaenda zvakanyanya online James.
Chinyorwa chakanaka uye chakakodzera nguva Douglas. Isu tanga tichitamba tichitenderedza ne Twitter Audio makadhi ayo andinofunga inzira huru yekubvumidza vaimbi (uye podcasters) kunanga vangangove vateereri vatsva etc.